Agriculture Specialist (Project Manager) | Best Oil Company ﻿
Agriculture Specialist (Project Manager)
14.7.2020, Full time , Energy / Utilities
Company: Best Oil Company
Best Oil Company (BOC), along with PT Power, is one of Myanmar’s leading petroleum companies. BOC hasacommanding presence in the upper Myanmar region with many retail locations andalargely established distribution network.
We are one of the fastest growing yet closely-bonded group of companies that providesawide range of opportunities and career development. We welcome highly-driven individuals and capable talents that will help BOC to achieve greater heights.
•	ဥယျာဉ်ခြံလုပ်ငန်း ၊ လယ်/ယာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ ကို စတင်ရန်အတွက် ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ရမည်။
•	B.Agr.Sc (or) Any Graduate with related diploma
•	Min5Year experience in related field
Job details Job Category: Agricultural Jobs
Company Industry: Energy/Utilities
Job posted: 14/7/2020
677 Days, Full time , Energy / Utilities
Best Oil Company (BOC), along with PT Power, is one of Myanmar’s leading petroleum companies. BOC hasacommanding presence in the upper Myanmar region with many retail locations andalargely established distribution network. We are one of the fastest growing yet closely-bonded group of companies that providesawide range of opportunities and career development. We welcome highly-driven individuals and capable talents that will help BOC to achieve greater heights.
Site In Charge ( စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း)
•	စက်သုံးဆီတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် နေထိုင်၍ ပစ္စည်းထိန်းသိမ်းခြင်း ၊ အဝင်/အထွက်များစစ်ဆေးခြင်း၊ လက်ခံခြင်း၊ တာဝန်ခံဆောင်ရွက်ခြင်း၊စာရင်းရေးသွင်းခြင်း/ရှင်းလင်းခြင်း •	တည်ဆောက်ရေးတွင် လာရေ� ...
Welder/Operator ( For Pump Service Operation)
•	တညျဆောကျရေးလုပျငနျး၊ Pump Service & Maintenance လုပျငနျးမြားတှငျ M&E (Welding) လုပျငနျးမြားဆောငျရှကျပေးရခွငျး၊ သကျဆိုငျရာလုပျငနျးမြားအတှကျ လိုအပျသောနရောမြားတှငျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျပေးရခွငျး
Trainee ( Pump Service & Maintenance)
•	ဆီအရောင်းဆိုင်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် M&E လုပ်ငန်းများ၊ Pump Service & Maintenance လုပ်ငန်းဆိုင်ရာမျာကို အခြေခံမှစတင်၍ သင်ယူပြီး သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်လုပ်ကိုင်ရပါမည်၊
Merchandise Buyer (Convenience Store-Mandalay Head Office)
698 Days, Full time , Energy / Utilities
•	ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူရာတွင် အကျိုးအမြတ်ကောင်းရရှိစေသည့် source, supplier များရွေးချယ်ဝယ်ယူခြင်း •	ရက်သတ္တပတ်တိုင်းအတွက် ဈေးကွက်ဆင်းကာ ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်ရေးဆွဲခြင်း
Job ads in Purchasing/Material Management Jobs and in Sagaing Region
•	ဆီအရောင်းဆိုင်ခွဲများ၏ လက်လီ/လက္ကားရောင်းချခြင်းများ၊အရောင်းမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ဝန်ထမ်းအုပ်ချုပ်ရေး၊ပစ္စည်း(ဆီ)/ငွေစာရင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ် ...
Job ads in Accountancy Jobs and in Kachin State
Supervisor(Muse & Lashio)
Junior Accountant(Muse & Lashio)
•	ဆီအရောင်းဆိုင်ခွဲများ၏ ဆီအရောင်းစာရင်း၊ငွေစာရင်း၊ပစ္စည်းစာရင်းနင့် ဆက်စပ်စာရင်းများအားလုံး အား စာရင်းသွင်းခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ Report များ ပေးပို့ခြင်း။ •	စီမံရေးရာလုပ်ငန်းစဉ်များဆောင်ရွက်ပေးခြင� ...
Management Trainee(Muse & Lashio)
699 Days, Full time , Energy / Utilities
•	ဆီအရောင်းဆိုင်ခွဲများတွင် ဆီလုပ်ငန်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို အခြေခံမှစတင်လုပ်ကိုင်သင်ယူစေပြီး •	အစမ်းခန့်ကာလပြီးမြောက်ပါက သက်ဆိုင်ရာဆီအရောင်းဆိုင်ခွဲများတွင် သင့်တော်သောရာထူးဖြင့်တာဝန်ချထ ...
Job ads in Admin, Secretarial & PA jobs and in Shan State
Job ads in Admin, Secretarial & PA jobs and in Kachin State
Agriculture Specialist (Project Manager) Agricultural Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Best Oil Company Agricultural Jobs Agricultural Jobs Energy/Utilities Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
MPRL E&P Pte Ltd
Yangon (Rangoon) 677 Days